चीनको नयाँ आर्थिक नीतिले विश्वभर कस्तो असर गर्नेछ ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ अन्तराष्ट्रिय समाचार ∕ चीनको नयाँ आर्थिक नीतिले विश्वभर कस्तो असर गर्नेछ ?
दीप संञ्चार असोज २२, २०७८ गते ९:२२ मा प्रकाशित
चीनले आफ्नो नयाँ आर्थिक नीतिहरु मानिसहरुबीच बढ्दो धनको अन्तर कम गर्नका लागि डिजाइन गरीएको बताएको छ। यस समय यो आर्थिक विकासका लागि अनुकूल रहेको चीनको दाबी छ। तर आलोचकहरुले यो चिनियाँ सरकारको नयाँ तरिका भएको र यसले देशमा व्यापार र समाजलाई अधिक नियन्त्रण गर्न सक्ने बताएका छन्।
चीनको नयाँ ‘साझा समृद्धि’ अभियानको उद्देश्य पुरा तरिकाले देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई लक्षित गरिएको छ, तर यसले बाँकी विश्वमा पनि ठूलो असर पार्ने सम्भावना छ।
यो नीतिको सबैभन्दा स्पष्ट परिणाममध्ये एक यो हो कि एकपटक फेरी घरेलु बजारमा चिनियाँ व्यापारको पूरा ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
कम्पनी अलिबाबाले हालैका दिनहरुमा आफ्नो वैश्विक स्तरमा लगातार वृद्धि गरिरहेको छ। उसले सरकारको ‘साझा समृद्धि’ अभियान अन्तर्गत १५।५ बिलियन डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले यसका लागि एउटा टास्क फोर्स पनि गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारी डेनियल जाङ्गले गर्नेछन्।
कम्पनीको भनाइ छ कि यो देशको आर्थिक वृद्धिका लागि यो लाभदायक हुनेछ। देशको अन्य ठुलो टेक कम्पनी पनि यो अभियानमा सामेल हुँदैछ। यो नयाँ अभियान अन्तर्गत कम्पनीले ७।७ अर्ब डलर लगानी गरेको छ।
विलासिता क्षेत्र प्रभावित हुनेछ
तर यदि ‘साझा समृद्धि’ चीनको मध्यम वर्गको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नका लागि हो भने यो ती कम्पनीहरुका लागि वरदान साबित हुनेछ जो यि नयाँ ग्राहकहरुसम्म पुग्न चाहन्छन्।
चीनको ईयू चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष जर्ज वाटके भन्छन्, “हामी देख्न सक्छौं कि यो युवा रोजगार योजनामा एक विशेष ध्यान छ। यदि उनीहरुलाई यो देशमा सामाजिक प्रगतिको एक हिस्सा बन्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने यो राम्रो कुरा हो। किनकि जब मध्यम वर्ग प्रगति गर्दछ, त्यहाँ अवसरहरु पनि धेरै पाइन्छ।’’
जे होस्, जर्ज वाटकेले लक्जरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु सरकारको यस कदमका कारण पीडित हुन सक्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, “विश्वव्यापी रूपमा विलासिताका सामानहरुको विश्व उपभोगको लगभग ५० प्रतिशत चीनको हो। त्यहाँ क्षति हुनेछ।’’
वाटकेले जब सामान्य चिनियाँहरुको आय बढाउनको लागि चिनियाँ अर्थव्यवस्थामा महत्वपूर्ण सुधारहरुको आवश्यकता रहेको र ‘साझा समृद्धि’ अभियान यो उद्देश्यसम्म पुग्नका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरेका छन्।
चीनको नयाँ समाजवाद
‘साझा समृद्धि’ भनेको समाजलाई अझ न्यायपूर्ण र समान बनाउनु हो। कम्युनिष्ट पार्टीका अनुसार यसको परिभाषा यही नै हो। पार्टीका अनुसार योसँग विश्वव्यापी स्तरमा समाजवादको अर्थ परिवर्तन गर्ने शक्ति छ।
बेइजिङको सेन्टर फर चाइना एण्ड ग्लोबलाइजेशनका वांग हुयाओ भन्छन्, “पार्टीलाई अब आम श्रािमकहरुको चिन्ता रहेको छ। जस्तै ट्याक्सी चालक, आप्रवासी कामदार र डिलिवरी केटाहरु आदि। चीन पश्चिमी देशहरुमा देखिए जस्तै सामाजिक ध्रुवीकरणबाट बच्न चाहन्छ र जसले विश्वव्यापीकरण को प्रभावलाई उल्टाउन सक्छ।’’
तर लामो समयदेखि चीनको मामिलामा नजर राख्नेहरु भन्छन् यदि पार्टीको उद्देश्य समाजवादलाई फरक चिनियाँ छवि दिने र यसलाई विश्वको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने ‘साझा समृद्धि’ सही तरिका हुन सक्दैन।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको चाइना सेन्टरका सहयोगी जर्ज म्याग्नस भन्छन्, “यो सी जिनपिनको बढ्दो नियन्त्रणको वामपन्थी दृष्टिकोण हो। उनले प्रगतिशील करहरुमा कुनै कदम चालेका छैनन्। ‘सामान्य समृद्धि’ को अर्थ युरोपेली शैली समाज कल्याण मोडेलको नक्कल गर्नु होइन।’’
उनी भन्छन्, “हाल पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्ने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। उच्च आम्दानीमा अधिक कर लगाइनेछ, साथै निजी कम्पनीहरुलाई पार्टीको उद्देश्यका लागि दान गर्नका लागि दबाब दिइनेछ। तर विकास करका बारेमा केहि भएको छैन।’’
उनले यसबाट सी जिनपिनको नेतृत्वमा चीन कसरी शासित हुनेछ भन्ने कुराको महत्तवपूर्ण हिस्सा नयाँ आर्थिक नीतिहरुले स्पष्ट भएको बताए। ‘साझा समृद्धि’ को साथमा सरकार एक समान समाज निर्माण गर्ने बाधा गरिरहेको छ। जहाँ अधिक र धनी मध्यम वर्ग हुनेछ र यस्ता कम्पनीहरु हुनेछन् लिनेको बदलामा समाजलाई केही दिने काम गर्नेछ।
चीन सधैं विदेशी कम्पनीहरुका लागि एक कठिन बजार भएको छ। यो नयाँ नीतिले संसारको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थामा यी कम्पनीहरुका लागि थप कठिनाइहरु सिर्जन गर्नेछ।बिबिसी